Fanafainganana ny asam-pitsarana no tarigetra. Tanjona voalohany ny hanatrarana ny taha 70/30, (70% no voafonja voatsara, raha 30% sisa no miandry fitsarana) mialoha ny fialan-tsasatry ny Fitsarana izay hanomboka ny 15 Desambra 2021. Mila vita ny asa. Hisy ny fanaovana tomban’ezaka ho an’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, na eo anivon’ny Fitsarana, na ny eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.
Ankoatra izay, tsy handeferana velively ireo izay manao ny tsy ara-dalàna, ohatra ny raharaha Fonjan’i Miandrivazo. Filaminana no ilain’ny vahoaka, hisian’ny fampandrosoana ny firenena. Fanantenana, ny hiakaran’ny sora-bola ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana ao anatin’ny LFI 2022.
Santionany amin’ireo valim-panontaniana napetraky ny mpanao gazety ireo, androany Alakamisy 18 Novambra 2021 teto Faravohitra.
Atolotra manontolo ny fanazavana nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.